Ogaden News Agency (ONA) – Mr. Jakob Kellenberger; Zinawi ayaa noo diiday inaan galno Ogadenya
Mr. Jakob Kellenberger; Zinawi ayaa noo diiday inaan galno Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ April 30, 2011
Madaxweynaha Laanqayrta Cas (International Committee of the Red Cross ICRC) mudane Jakob Kellenberger ayaa ugu dambayntii wuxuu daaha ka qaaday inay xukuumadda Itobiya u diiday inay hawlo bani-aadminimo ka fuliyaan gudaha Ogadenya. Haya’adda ICRC ayaa 4 sano ka hor laga soo saaray dalka iyadoo ay ku eedeeyeen inay taageero siiyeen ururka mucaaradka ku ah joogitaanka Itobiya, arintaasoo ay si aad ah u beenisay haya’adda ICRC oo la ogsoonyahay inuusan ka mid ahayn barnaamijyadeeda inay taageero siiyaan mid ka mid ah labada dhinac ee ishaya.
Madaxweynaha ICRC Mr. Jakob Kellenberger ayaa sheegay inuu wadahadalkii uu kala yeeshay arimaha Ogadenya RW Itobiya uu guuldarro kala kulmay.
Wuxuu yidhi Mr. Kellenberger; “Wadahadal laba geesood ah ayaan shalay yeelanay. Suurtagalna ma noqonin in dhawaanahan aan dib ugu noqono gobolka Ogadenya.”
Waxaa la wada ogsoonyahay inay Itobiya ka mamnuucday inay galaan Ogadenya saxaafadda caalamka iyo haya’adaha insaaniga ah. Idaacadda VOA-da oo wareysatay madaxweyne Jakob Kellenberger ayaa ku dartay in warbixintii Wasaaradda AD Mareykanka ee xuquuqda aadanaha ay sheegtay in Itobiya ay ka mamnuucday goobaha ay dagaalada ka socdaan Ogadenya daawadii iyo cuntadiiba.
Itobiya oo ku caan baxday beenta iyo cabudhinta xaqiiqada inay dibadda u soo baxdo ayaa marka ay la hadlayso caalamka intiisa kale u sheegta inay ka mamnuucday saxaafadda iyo daryeelka aadanaha gooba cayiman oo dagaalada ay ka socdaan, hasa ahaatee Itobiya waxay u aragtaa Ogadenya oo idil inay tahay goob dagaal, sidaa darteed aan la gali karin.
Waxaana la ogsoonahay in haya’adda Laanqayrta cas ay ka mid yihiin dastuurkeeda inaan la shaacin waxa ay ku arkaan ee xadgudub ah goobaha dagaalada ay ka socdaan oo aan labada daraf ee ishaya aan midna la eedeynin. Sidaa darteed Itobiya ujeedada ay uga soo saartey haya’adda ICRC gudaha Ogadenya waa inaan wax mucawaana ah aan la gaarsiinin dadka shacabka ah, isla markaana ay ku quusiso hay’adaha kale ee tagi lahaa halkaa marka loo diido Laanqayrta cas –ICRC-
Halganka shacabka S.Ogadenya wuu soconayaa ilaa guusha laga hanto kuma hakanayo is-hortaaga haya’adaha caalamiga. Dambiyada ay ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Cabdi iley ka galayaan shacabka Somalida Ogadenya ma qarsoonaan doono, saxaafadda caalamka iyo haya’daha xuquuqul insaankana waa la horkeeni doonaa goor aan fogayn.
haa wixii jiray ayuu sheegay Madaxweynaha Laanqayrta Cas (International Committee of the Red Cross ICRC) mudane Jakob Kellenberger inkasta oo ay la daaheen, taasi waa xaaladda ka jirta Ogaadeeniya !
hase ahaatee allaah ayuu shacabku ku tiirsanyahay guushana wuu ghaadhi mar dhaw insha allaah,
OGAADEENYA WAY XOROOBI XAQIIQDII WAA SIDAA
ITOOBIYA WAY BURBURI OGAADAAY WAA SIDAA